တီအာဝိုင် : ခင်သာဇာတိ မောင်သာဂိ(၁၃)
ကျောင်းတွင်း ဝေယျဝစ္စများလုပ်ခြင်း၊ ဆရာတော်နှင့် လောကီအရေး လောကုတ္တရာအရေုးများဆွေးနွေး
မေးမြန်းခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ပင် အချိန်ကိုကုန်လွန်စေခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လုပ်ကိုင်နေရသော အလုပ်များကို ပုထုဇဉ်လူသားပီပီ ငြီးငွေ့စပြုလာသည်။ငါဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီအတိုင်းပဲ သွားနေတော့မှာလား၊ ငါကိုရင်ဝတ်လာတာဘာကြောင့်ဝတ်လာတာလဲ၊ ပြီးတော့ငါလူဖြစ်လာတာကရော ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲ၊လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လူလောကမှာဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ၊ လူ့ဘဝရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဆို
တာဘာလဲ၊ပြီးတော့ငါ့ဘဝကရောအဓိပ္ပါယ်တွေရှိနေပြီလား စသည်ဖြင့်မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို ထုတ်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးသည်။လူ့ဘဝရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာဘာလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ဖို့အတွက်လူဆိုတာဘာလဲ၊
ဘဝဆိုတာဘာလဲ၊အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာကရောဘာလဲ၊အဲ့ဒိသုံးခုဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပြီး လူဘဝရဲ့အဓိပ္ပါယ် ဒါမှ မဟုတ် အဓိပ္ပါယ် ရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ….။အင်း…လေ့လာမိသလောက်စာပေမှာတော့ ကုသလာကုသလံ မနတိဇာနာတီတိ မနုေဿာ ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားဝေဘန်နိုင်တဲ့အတွက် လူလို့ ခေါ်တယ်။ဒါကဖြစ်နိုင်ပါ့မလား…ဒို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်တော့ လက်ခံကောင်း လက်ခံ နိုင်သလို ဖြစ်ကောင်းဖြစ် နိုင်တယ်။ ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကို ဗုဒ္ဓပဲဟောခဲ့တာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့လူတွေလဲလူတွေပဲ။ မဟုတ်သေးဘူး.. မဟုတ်သေးဘူး… ဒီရှင်းလင်းချက်ကြီးက ကုသိုလ်နဲ့ အကုသိုလ်ကိုမခွဲတတ်ရင်ကို လူ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သက်ရောက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမဆန်လိုက်တာကွာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ၊ လူပီသတယ် ဆိုတဲ့စကားလုံး တွေကို ပြန်ကြည့် လိုက်တော့ လဲဒီဖွင့်ဆိုချက်က မှန်နေပြန်ရော။ ဟုတ်တယ်…လက်နက်အားကိုး၊ အာဏာအားကိုး၊ ဂုဏ်အားကိုး၊ ရာထူးအားကိုး၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အစွမ်းအစနဲ့ ကိုယ့် အောက်နိမ့်ကျတဲ့ သူတွေကို နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်ချင်တဲ့ လူမျိုးတွေ၊ အကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ မတရားမှုတွေကိုပဲ လုပ်ချင်နေတဲ့လူတွေကို လူမဆန်လိုက်တာလို့ သုံးနှုန်းပြောဆိုကြတယ်။ ဒီရှုဒေါင့်က ကြည့်ရင်တော့ ကုသိုလ်နဲ့ အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားပြီး သိတဲ့လူကိုမှ လူလို့ခေါ်တယ် ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဟော..ပြီးတောလဲ ဒုက္ခရောက်သူကို ကရုဏာထားတဲ့သူ အကြင်နာ တရားကြီးမားတဲ့သူ တွေကိုကျတော့လဲ လူပီသတယ် လို့ ဆိုကြပြန်ရော။ ဖြစ်သင့်ပါတယ်. .ဖြစ်သင့်ပါတယ်. ဟုတ်တယ်.ကုသိုလ်နဲ့
အကုသိုလ် ကိုခွဲခြားဝေဘန် သိတတ်မှသာလျှင် လူလို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားဟာ ဒီရှုထောင့်က
နေကြည့်ရင် သိပ်ဖြစ်သင့်တယ်. မှန်ကန်မှုရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ အဆင့်မှာရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ
အမည်ခံပြီး လူသတ် မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ လူတွေရှိသလို၊ အခြားဘာသာကနေပြီး
မိမိရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကမ္ဘာလေကကြီးကို ကုစားနေတဲ့လူတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းစေတဲ့လူတွေ.အများကြီးရှိတယ်..
ဟုတ်တယ်..လူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးသိတတ်နားလည်မှလူလို့ခေါ်လို့ရမယ်..ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် တော့လူမည်ကမတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေတော့မှာပေါ့။တခုတော့ရှိတယ် ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ ဘုရားရှိခိုးတာ ပုတီးစိတ်တာဘုရားပန်းကပ်လှူဒါန်းတာလောက်ကိုပဲ ကုသိုလ်လို့မသတ်မှတ်ပဲ ကုသိုလ်ဆိုတာ မိမိ သူတပါးအကျိုးများစေမဲ့အလုပ်ကို စေတနာပါပါနဲ့လုပ်တာလို့တော့ ငါကိုယ်တိုင်နားလည်နေဖို့လိုတယ်..။
ပြီးတော့ အတ္ထာနတ္ထံ မနတိ ဇာနာတီတိ မနုေဿာ- အကြောင်းအကျိုးး၊ အကောင်းအဆိုးကို
ခွဲခြား ဝေဘန်နိုင်တဲ့အတွက် လူလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ ဒါကရော.. ဘယ်လိုလဲ… ဖြစ်သင်ပါ့မလား…လောကမှာ
အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးကို မခွဲခြား မဝေဘန်နိုင်ပဲ ဆင်ကန်ုးတောတိုးသလို ဘဝကိုလျောက်
လှမ်းနေတဲ့ လူတွေလဲ လောကမှာ အများကြီးပဲ။ သူတို့ကိုလဲ လူလို့ပဲခေါ်တာပါပဲ။ဘာကြောင့်အကြောင်း
အကျိုး အကောင်းအဆိုး ကိုနားလည်ခွဲခြားဝေဘန်နိုင်မှ လူလို့ခေါ်တယ်လို့ ပြောရတာလဲ။ အော်ဟုတ်ပြီ
ဟုတ်ပြီ… ဒါလဲဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဖြစ်သင့်တယ်။ လောကမှာလူတွေ သုံးနှုန်းနေတဲ့ လူစင်မှီအောင်တွေးနိုင်
ခေါ်နိုင်တဲ့လူ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးတခုရှိတယ်။ အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုး ကိုခွဲခြားဝေ
ဘန် သိနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ လူတွေကို လူစင်မမှီလို့ သုံးကြတာပဲ..။ ဒီအဖြေ ကိုထုတ်ရမယ် ဆိုရင်တော့..
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီးမှ အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးကို မခွဲခြားနိုင်ဘူး၊ မဝေဘန်နိုင်ဘူး၊ မသုံး
သပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင် ဒီလူဟာ လူမည်ကာ မတ္တမျှပဲဖြစ်ပြီး လူစင်မမှီဘူးလို့ ခေါ်ရမှာပေါ့… လူပီသချင်ရင်
နေရာတိုင်းမှာ အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးကို သု့နေရာနဲ့သူ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်၊ ဟုတ်
တယ်။ လူဆိုတာဒါပဲ….။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ်စည်းမျဉ်းနဲ့ကို အံကိုက်မှုရှိမရှိ ယုတ္တိရှိ မရှိ စမ်းစစ်
သည်၊ ဆင်ချင်သည်၊ တွေးတောသည်၊ ထို့နောက် ကိုယ်ထုတ်တဲ့ အဖြေကို ကိုယ့်ဘာသာ လက်ခံထား
လေပူများ ဒလဆက်တိုက်ခတ်နေသည့်ကြားမှ လေနုအေးလေးတချက်က အလစ်ဝင်မွှေ့လိုက်၍ ကြည်နူးမှု အချို့ ကိုရရှိလိုက်သည်။ ကျောင်းပရဝုဏ်အတွင်း၌ လမ်းလျှောက်ရင်း တွေးရင်း တောရင်းဖြင့်
အတန်ငယ် ညောင်းညာ လာသလိုရှိသည်နှင့် ကျောင်းနောက်ဖေးရှိ စမ်းချောင်းကလေး အနီးရှိ ခုန်တန်း
လျားလေး သို့ဦးတည်လျောက်လှမ်းခဲ့သည်။ ခုန်ပေါ်တွင် ထိုင်ရင်းနှင့် ကျောင်းပတ်ပတ်လည်တွင်ဝိုင်းရံ
လျှက်ရှိသောလယ်ကွင်းများကိုတမျှော်တခေါ်ကြီးလှမ်းကြည့်သည်။ ထို့နောက်တွေးလက်စအတွေးစ လေးများခေါင်းထဲသို့ပြန်ဝင်လာသည်။ ဘဝဆိုတာကရောဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဘဝ လို့ ခေါ်တာလဲ..စာပေမှာတော့ ဘဝနံ ဘဝေါ-ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားဟာဘဝပဲ..ဘာတွေဖြစ်တာလဲ…ရုပ်နာမ် ဓမ္မသင်္ခါရတွေဖြစ်တာ…ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပါမှတော့ ကျွဲကူးရေပါနည်းအတိုင်း ပျက်တယ် ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေလဲ ပါလာရတယ်.. ဒီတော့ ရုပ် နာမ် ဓမ္မ သင်္ခါရတွေ ဖြစ်လာခြင်း ပျက်သွားခြင်း သဘောကိုပဲ ဘဝလို့ခေါ်တာ… ဘယ်အချိန်ကနေ ဘယ်အချိန်ထိ ဖြစ်ပျက်နေတာကို ဘဝလို့ခေါ်တာလဲ…အမိဝမ်းတိုက်ထဲမှာစပြီး ကလလရေကြည့်တည်ပြီး နောက်ဆုံးကွယ်လွန်တဲ့ အချိန်အထိကို ဘဝလို့ခေါ်တာပေါ့…အတိုချုပ်ပြီးရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တော့ မွေးဖွားပြီးအချိန် နဲ့ မသေခင်စပ်ကြားမှာ ဖြစ်ပျက်မှုအားလုံးကို ဘဝလို့ခေါ်တာပဲ… လူမိန်းမရဲ့ဝမ်းဗိုက်မှာပဋိသန္ဓေနေ
ရင် လူ့ဘဝဆိုတာဖြစ်မယ်… ကြောင်မရဲ့ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ ပဋိသန္ဓေနေရင် ကြောင်ဘဝဆိုတာဖြစ်မယ်..
လူ့ဘဝ ဆိုတာကတော့ ဟုတ်ပြီ အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာကဘာလဲ.. အဓိပ္ပါယ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုမလေ့လာဖူးသေး
ဘူး… ကြားဖူး မြင်ဘူး သုံးဖူး သလောက်ကတော့ အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာ ရှင်းလင်းချက်… ဖြေရှင်းချက်…ဖွင့်
ဆိုချက်… အနှစ်သာရ…. အကျိုးတရား… ပြီးတော့… ပြီးတော့… တွေးရင်း တွေးရင်းဖြင့် ခေါင်းထဲ တွင် မူး ဝေသလိုလိုပင် ဖြစ်သွားသည်။ထို့ကြောင့် အကြောအချဉ်များပြေလျော့သွားစေရန် ခေါင်းကို ခပ်စပ်စပ်ကလေး ဘယ်ညာရိမ်း၍ ရမ်းခါလိုက်သည်။
ကဲ…ဖြစ်ခြင်တာဖြစ်ပါစေတော့ မရှင်းတာကို ညကျမှ ဆရာတော်ကို လျှောက်ထားမေးမြန်းတော့မယ်..
အခုလောလောဆယ်တော့ အဓိပ္ပါယ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အနှစ်သာရ လို့ပဲ ခဏ မှတ်ထားပြီး ကိုယ့်မေးခွန်း
တွေကိုယ်တိုင် ထပ်ဖြေလိုက်ဦးမယ် ဟုစဉ်းစားလိုက်သည်။ ထိုင်ခုံပေါ်မှ ခဏဆင်း၍ ဆယ့်နှစ်ရာသီ
စီးဆင်းနေသော စမ်းချောင်းငယ်လေး အတွင်း ရေအနည်းငယ်ကို ညာဘက်လက်ဖြင့် အနည်းငယ်မယူ
ပြီး ဂုတ်ကျောတွင် သပ်ချလိုက်သည်။ အနည်းငယ် လန်းဆန်းသလို ရှိသွားသည်။ ထို့နောက်အသက်ကို
ခပ်ပြင်းပြင်း လေးတချက် ရှူလိုက်သည်။ ပို၍ လန်းဆန်း လာသလိုရှိသွားသည်။ ဘဝမှာ မောပန်းမှုတွေ
နွမ်းနယ်မှုတွေ ခက်ခဲမှုတွေ ကြမ်းတမ်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့လာပြီဆိုရင် အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုခဏတာ
မေးထားလိုက် သာဂိ… အနားယူပါ.. အပန်းဖြေပါ… အသက်ကိုဝအောင်ရှူပါ… လူတွေအတော်များများ
ဟာ ဘဝကို တန်ဖိုးမထားတာလား... အဲ့ဒိဘဝဆိုတဲ့အရာ အနားယူပေးရတယ် အပန်းဖြေပေးရတယ်..
အသက် ရှူတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတာကို နားမလည်တာလားမသိဘူး သာဂိရဲ့….နွားကျောင်း
သားဘဝဖြင့် ကျောင်းသို့ မကြာမကြာလာ၍ ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုစုပေးစဉ် ကာလများက ဆရာတော်
မိန့်ကြားခဲ့သည့် စကားများကို ပြန်လည်ကြားမိသည်။ ထို့ကြောင့် အတွေးပေါင်း များစွာအနဲ့အတူ
ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှုများကို ဖြေလျှော့ရန်အတွက် အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း ရှူရှိူက်ခြင်းစသည်ကို ပြုမိခဲ့
ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဝမှာ မောပန်းမှုတွေ တဲ့ လာပြန်ပြီ ဒီဘဝ ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ငါနဲ့ကတော့မြန်မြန်
မရှင်းရင်မလွယ်ဘူး.. အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာကို အနှစ်သာရ လို့ငါကလက္ခံထားတယ်ဆိုတော့ အနှစ်သာရ
ဆိုတာဘာလဲ… အနှစ်သာရ ဆိုတာ အကျိုးအမြတ် ရလာဒ်… တန်ဖိုး.. ကောင်းသောအကျိုးတရား…
ဒါဆိုဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်နဲ့ အနှစ်သာရယ် တန်ဖိုးရယ်တူသလား…။ ခေါင်းထဲတွင် ရှင်းသွား လင်းသွားသ
ကဲ့ ခံစားလိုက်ရပြီး ဟုတ်တယ်… တူတယ် ဟုမိမိကိုယ်ကို အဖြေပြန်ပေးမိသည်။
ဒါဆိုရင် လူရယ်..ဘဝရယ်..အဓိပ္ပါယ် သုံးခုကိုပေါင်းလိုက်ရင် ဘယ်လိုသဘောတရားကိုသက်
ရောက်သွားနိုင်မလဲ…အဲ့ဒိ အဖြေကို ဖြေနိုင်ရင် ငါလိုချင်တဲ့ လူ့ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ငါ
သိနိုင်ပြီ… ဟုတွေးရင်း လေးလန်သော အတွေးများကို ဆက်တွေးရန် မဝံ့မရဲဖြစ်ဟန်ဖြင့် သက်ပြင်း
ပူကြီးတချက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။
သို့သော် တွေးရမယ်.. မတွေးလို့မရဘူး.. လူ့ဘဝဆိုတာ ဘယ်လိုတွေးတယ် ဘယ်လောက်တွေးတယ်
ဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီး တိုးတက် ပြောင်းလဲလာတဲ့အရာ တစ်ခုဖြစ်တယ်.. ဟုတ်တယ် ငါရှောင်ပြေး
လို့မဖြစ်ဘူး။ အခက်အခဲနဲ့ အကျပ်အတည်းဆိုတာ လူ့ဘဝရဲ့စိန်ခေါ်သံ လည်းဖြစ်တယ်။ လူဆိုတာ
ဘဝရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို ပြန်ပြီး လက်ခမောင်း ခတ်နိုင်ရမယ်…… စသည်…စသည်ဖြင့်………………………..
ခက်ခဲသောလေးနက်သောပုစ္ဆာများ၊ တွေးခေါ်စရာများ၊ စဉ်းစားကြံစည်စရာများကိုတွေ့လျှင် ရှောင်ပြေး
လေ့ရှိသော မိမိ၏အကျင့်ကို ထိန်းကျောင်းနေကျ ပြုပြင်နေကျအတိုင်း ထိန်းကျောင်းပြုပြင်လိုက်သည်။ဲ
လူမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းထဲကနေ မွေးဖွားလာပြီး မသေဆုံးခင် ကာလအတောအတွင်း အနှစ်သာရရှိ
အောင် တန်ဖိုးရှိအောင် နေထိုင်သွားနိုင်တာကိုပဲ… တန်းဖိုးရှိတဲ့လူ၊ အနှစ်သာရရှိတဲ့လူ၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့လူ
လို့ခေါ်တာလား…. ဒါဆိုရင် လူ့ဘဝရဲ့ အနှစ်သာရဆိုတာဘာလဲ၊ တန်ဘိုးဆိုတာဘာလဲ၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိ
အောင် ဘယ်လိုနေထိုင် ကျင့်ကြံ ပြောဆိုရမှာလဲ…. လူဘဝမှာ စည်းစိမ်တွေရစ်၊ အပျော်အပါးတွေခံစား၊
တန်ခိုးအာဏာ ပါဝါတွေချဲ့ထွင်၊ အချွေအရံ အသင်းအပင်းတွေနဲ့ သူ့ကိုကိုယ်က မြှောက်စားလိုက်
ကိုယ်ကသူ့ကိုပြန်မြှောက်လိုက်နဲ့ နေနိုင်တာဟာ ဘဝရဲ့အနှစ်သာရလား… မဟုတ်ဘူး.. ဒါတွေဟာ
ဘဝရဲ့ အနှစ်သာရမဟုတ်ဘူး… အနှစ်သာရဆိုတာ ရေရှည်ခံရမယ်.. ထာဝရဖြစ်တည်မှုရှိရမယ်… ဒါတွေ
ဟာ ဘယ်တော့မှ ရေရှည်တည့်တံ့နိုင်တဲ့အရာ တွေမဟုတ်ဘူး…. လူ့ဘဝဆိုတာ အမြဲတန်းပျော်ရွှင်
အမြဲတန်း အောင်မြင် အမြဲတန်း အထက်တန်း ကျနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး….ပြီးတော့ ဒါတွေကိုလုပ်နိုင်နေ
တဲ့သူတွေ၊ ရရှိနေတဲ့သူတွေကရော အမြဲတန်းစိတ်ချမ်းသာနေရလာ... မဟုတ်ဘူး… အမြဲတန်းမဟုတ်
ဘူး… ဘယ်လောက်ပဲ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ အခြံအရံတွေပေါပေါ… အမြဲတန်းစိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်နေရ
တယ် လို့မကြားဖူးဘူး… သူဌေးလည်း သူဌေးအလျှောက် ရှင်ဘုရင်လဲ ရှင်ဘုရင်အလျှောက် စိတ်ညစ်
စရာ.. မပျော်ရွှင်စရာတွေရှိနေတာပဲ.. သူတို့ကမှ သူတို့ရဲ့ စည်းစိမ်အာဏာတွေကို တနေ့ဘယ်သူက
များ သိမ်းပိုက်သွားလေမလဲ.. ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ပက်ပင်းတိုးပြီး ပျောက်ဆုံးသွားလေမလားနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်
နေရသေးတယ်… အဲ့ဒိတော့ ဒါတွေဟာ လူ့ဘဝရဲ့ အနှစ်သာရမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ တန်ဖိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊
ဒါတွေကြောင့် လူဘဝဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသွားတယ်ဆိုတာလဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ ငါဟာ လူ့ဘဝမှာ ဘာ
ကြောင့် နေ့စဉ် ရှင်သန်နေရတာလဲ.. ဘာတွေကိုလိုချင်လို့လဲ…. ဘာတွေကိုလုပ်ချင်လို့လဲ… ဘာတွေ
လုပ်စရာရှိလို့ ရှင်သန်နေတာလဲ… နေ့စဉ်စာဖတ်ဖို့လား… မဟုတ်သေးဘူး… စာဖတ်တယ်ဆိုတာ…
စိတ်အတွက် ဖျော်ဖြေမှုနဲ့ လေ့လာမှုတခုပဲ… လုပ်သင့်တဲ့အလုပ် ဆိုပေမဲ့ လုပ်ကိုလုပ်ရမဲ့အလုပ်တော့မ
ဟုတ်ဘူး ထင်တယ်… .ပြီးတော့ ဝေယျာဝစ္စတွေလုပ်ဖို့ ရှင်သန်နေတာလား… ဒါလဲမဟုတ်သေးဘူး…
ဝေယျာဝစ္စလုပ်တယ် ဆိုတာ ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်တခုပဲ ဒါပေမဲ့… ဒါပေမဲ့… ငါ့ဘဝတလျှောက်လုံး ဒါတွေ
ချည်းလုပ်ပြီး သေသွားရမယ် ဆိုရင် လဲ ဟုတ်တော့ မဟုတ်သေးဘူး…. ငါဟာ လူ့ဘဝ ဆိုတာကြီးကို
ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိနဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ်… အခုတော့ မဖြစ်ချင်ဘူး ဆိုလဲ လူသားတစ်ယောက်
တော့ဖြစ်နေပြီ… လူသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘာတွေ ကိုလုပ်ဖို့လိုလဲ…. သီလ တွေချည်းပဲဆောက်
တည် နေရမှာလား.. ဒါန တွေချည်းလုပ်နေရမှာလား.. ဘာဝနာ တွေချည်းပွားများနေရမှာလား….မဟုတ်
ဘူး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ လုပ်နေရုံလောက်နဲ့တော့……၊ဟုတ်တယ်…ဟုတ်တယ်…ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ
ဆိုတာ လူရယ် လို့ဖြစ်လာရင် လုပ်ကိုလုပ်ရမဲ့ တာဝန် တစိတ်တဒေသလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်… ဒါတွေ
ကိုလုပ်နေရုံလောက်နဲ့ ငါ့ဘဝ ပြီးပြည့်စုံပြီလို့ တွက်လို့ မရသေးဘူး…လုပ်ရမယ်..ငါအများကြီး လုပ်စရာ
အတွေးစများက လုံးဝမပျက်သေး…ဆက်လက် တွေးနေသေးသည်..သို့သော် ကိုယ်တိုင်တွေး
နေသော အတွေးများကို ကိုယ်တိုင်မဖျက်နိုင်… မဖြေနိုင်သေးခင်မှာ ရုတ်တရက်မူးလဲသွားသည်။ လူက
သာ လဲကျသွားသော်လည်း ကိုရင်သာဂိ၏ အတွေးစများက မပျက်သေး၊ ဆက်လက် တွေးတောနေဆဲ။
ငါ့မှာ အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်စရာ ရှိသေးတယ်… ငါပွေနေလို့ မဖြစ်ဘူး… ငါလေနေလို့ မဖြစ်ဘူး…
လူအလုပ် မရှိတော့ ပွေတယ်.. စိတ်အလုပ် မရှိတော့ လေတယ်… မပွေအောင် မလေအောင်လူကိုရော
စိတ်ကိုပါ အလုပ် ပေးထားရမယ်…ဟုတ်တယ်…..။
လူအလုပ် မရှိတော့ ပွေတယ်၊ စိတ်အလုပ်မရှိတော့ လေတယ်၊ ငါ့ရဲ့ လူကိုရော စိတ်ကိုပါ အလုပ်ပေးရ
ကျယ်လောင်စွာ ဟစ်အော်လိုက်သော ကိုရင်သာဂိ၏ အလုပ်ပေးရမယ် ဟူသော အသံကြောင့် မိဘများ
နှင့် ဆရာတော်ပါ စိတ်ချမ်းသာသွားရသည်။ အမှန်တကယ်တော့ ကိုရင်သာဂိ အတွေး များလွန်း၍ မိမိ၏
အတွေးကို မိမိ ထိမ်းမထားနိုင်တော့ပဲ လဲကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် လူလဲသော်လည်း အတွေးများက
မလဲ၊ အသိတရားများက မလဲ၊ အသိတရားများ လဲယိုင်ခြင်းမရှိဘဲ မေ့မျောနေသူ ဟု ပင်ဆိုရလိမ့်မည်။
ကိုရင်… စိတ်ကိုထိမ်းပါကိုရင်… ရော့ ရေသောက်လိုက်… ဆရာတော်က ရေတခွက်ထိုးပေးသည်။ အား
လုံးကို ကိုရင်သာဂိက ဝှေ့ယမ်းပြီးစိုက်ကြည့်သည်။ ဖခင်၏စိုးရိမ်သောမျက်နှာ၊ မိခင်၏ပူပန်သော
အနေအထား၊ ဆရာတော်၏ ကြင်နာသော မျက်ဝန်း၊ ၄င်းတို့ကြားမှာ ကိုရင်သာဂိက မျက်နှာငယ်လေး
နှင့် ဆရာတော်အား လက်အုပ်ချီလိုက်သည်။
ကိုရင်သာဂိ..ကိုရင်စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်..ဆိုတာတပည့်တော် သဘောပေါက်နားလည်ပါ
တယ်… ဒါပေမဲ့ အခုခဏလေး… လူကိုရော စိတ်ကိုပါ ဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘဲ. .ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ဦး…. ခ
ဏ နေရင် တပည့်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်.. ဟုမိန့်ပြီး ဆရာတော် လှည့်ထွက်သွားသည်။ ကိုရင်သာဂိလည်း
ဆရာတော် အမိန့်ရှိခဲ့သည့် အတိုင်း လူကိုရော စိတ်ကိုပါ ဘာမှမလုပ်စေပဲ ခေတ္တငြိမ်နေကြည့်လိုက်
သည်။ မရ။ ငါဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်သွားတာလဲ.. အော်…ဟုတ်ပြီ…ဟုတ်ပြီ…လူ့ဘဝရဲ့
အဓိပ္ပါယ်ကို ငါအဖြေထုတ်နေတာ.. ဘယ်ထိရောက်သွားပြီလဲ…။ စဉ်းစားစမ်း..စဉ်းစားစမ်း။ အော်….
ဟုတ်ပြီ… အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုး ကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် လူလို့ခေါ်တယ်… ဟာ..
ငါတွေးနေတာ ဒီထက်မကတော့ပါဘူး…. အော်..သိပြီ… အမိဝမ်းတွင်းမှာ ကာလလရေကြည် စတည်တဲ့
အချိန်ကနေပြီး သေဆုံးတဲ့အချိန် ကာလအထိကို ဘဝလို့ခေါ်တယ်… ဟာ..မဟုတ်သေးဘူး………အဲ့ဒိ
အထိမကတော့ပါဘူး… အင်း…. လူ့ဘဝမှာ တန်းဖိုးရှိအောင်နေသွားနိုင်မှ…အနှစ်သာရရှိအောင်နေသွား
နိုင်မှ… အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်…. ဟာ… အဲ့ဒါလဲကျော်သွားပြီ… ဘယ်အထိရောက်သွားပါလိမ့်….
တန်ဖိုးရှိအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်သွားရမှာလဲ….ဟုတ်တယ်..ဟုတ်တယ်..အဲ့ဒိကိုရောက်နေပြီ..ငါဘယ် လိုနေထိုင်သင့်လဲ….လူအလုပ်မရှိတော့လေတယ်..စိတ်အလုပ်မရှိတော့….။
ခိုင်းဘဲ… .ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ဦး… ဟူသော ဆရာတော်၏ စကားကို ပြန်လည် အမှတ်ရလိုက်သည်။
ဘယ်လိုလဲ ကိုရင်သာဂိ… လူကိုရော စိတ်ကိုပါ ဘာမှမခိုင်းပဲ ငြိမ်ငြိ်မ်လေး နေလို့ရရဲ့လား… အစဉ်ပြေ
လား…. ဟုဆရာတော်ကမေးလိုက်သည်။ မ…မ…မ… တံတွေးကို မျိုချရင်း မရပါဘုရား ဟုပြောရန်ကြိုး
ကိုရင်သာဂိ လူကို အလုပ်ပေးတာလဲ လွယ်ပါတယ်… စိတ်ကို အလုပ်ပေးတာလဲ လွယ်ပါတယ်… လူတွေ
က လူကိုရော စိတ်ကိုပါ အလုပ်တွေအရမ်းပေး…တာဝန်တွေ ဖိပြီးပေးနေတော့…စိတ်ပန်းလူပန်းဆိုတာ
မျိုးဖြစ်တာပေါ့…..လူမပြောနဲ့ စက်ပစ္စည်း တွေတောင် အနားမပေးပဲ အမြဲတန်း မောင်းနှင် နေမယ်ဆိုရင်
အပူရှိန် တွေများပြီး ပေါက်ကွဲ သွားတာတို့ လောင်ကျွမ်း သွားတာတို့ သုံးမရလောက်အောင်ဖြစ်သွား
တတ်တယ် ကိုရင်သာဂိ…. အဲ့ဒိလို စက်ပစ္စည်းတွေဟာ စွမ်းရည် ကျသွားတတ်သလို လူတွေဟာလဲ
စိတ်ရော ကိုယ်ပါ အလုပ်တွေ ဖိပြီး ပေးနေမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အား ကျဆင်းတာတို့ စိတ်ခွန်အားကျ
ဆင်းသွားတာ တို့ပါဖြစ်တတ်တယ်… ကိုယ်ခန္ဓာအားကျဆင်းရင် ပုံမှန်လုပ်နေကျ အလုပ်ကိုပါမလုပ်နိုင်
တော့ပဲ ရပ်တန့်ထားရတတ်တယ်…. စိတ်ဓါတ်အား ကျဆင်းသွားရင်တော့ စိတ်ကျရောဂါဆိုတာပါဖြစ်
ပြီး ရူတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်သွားနိုင်တယ် ကိုရင်သာဂိ…..လူ့ဘဝမှ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ကိုယ့်နိုင်ဝန်ပဲ
ကိုယ်ထမ်းရတယ် ကိုရင်…. မထမ်းပဲလဲနေလို့မရဘူး…. လွန်ကျူးပြီးတော့လဲ ထမ်းခွင့်မရှိဘူး…. တခါ
တလေမှာ ကြိုးစားပန်းစား လုပ်ပြစ်သလို တခါတလေမှာလဲ ကြိုးစားပန်းစားနားပြစ်ဖို့မမေ့သင့်ဘူး.. ကို
ရင်….အဲ့သလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ လူဘဝမှာ အနှစ်သာရ ရှိရှိနေထိုင်ပြီး ဘဝကို တန်ဖိုးရှိအောင် လုပ်နိုင်
မှာမဟုတ်တော့ဘူး….ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်မှမလုပ်နိုင်ရင်လည်း အဲ့ဒိဘဝဟာ ဘယ်တော့မှ အဓိပ္ပါယ် ရှိလာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး…. လူ့ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဆိုတာကတော့အကောင်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုဦးတည်ထားပြီး ဆင်ချင်တုံတရားနဲ့အတူ မရောက်ရောက်အောင် လျှောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းပါပဲကိုရင်…
Posted by Toe Yee Yee at 11:35 PM